Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 11/07/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 11/07/2019
Sittway July 10The delegation led by Ms. Christine Burgener, Special Envoy of the UN Secretary- General, arrived at Sittway on 10 July 2019. They first visited the Arakan National Party at their headquarters in Lanmadaw South Ward.
Afterwards, they visited Webazawadi Monastery in Mingan Ward where IDPs were temporarily seeking shelter due to security operations in the area. Then, they interviewed the people about their current living conditions, the support from the MoSWRR and the local government, donations from CSOs and donors, education programmes for students there and the healthcare provided for them.
—Aung Ye Twin
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် စစ်တွေမြို့သို့ရောက်ရှိ
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Christine Burgener ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်တွင် စစ်တွေမြို့သို့ ရောက်ရှိကြသည်။ ရှေးဦးစွာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် အဖွဲ့သည် စစ်တွေမြို့၊ လမ်းမတော် တောင်ရပ်ကွက်ရှိ ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဗဟိုဌာနချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ထို့နောက် အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် အဖွဲ့သည် နယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေကြောင့် နေရပ်စွန့်ခွာ သူများ ခေတ္တနေထိုင်ရာ စစ်တွေမြို့၊ မင်းဂံရပ်ကွက်ရှိ ဝိဘဇ္ဇဝါဒီ (ပရဟိတ) ကျောင်းတိုက်သို့ သွားရောက်၍ လတ်တလော နေထိုင်စားသောက်မှုအခြေအနေ၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရမှ ထောက်ပံ့နေမှု၊ အရပ်ဖက်လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် စေတနာရှင်များ၏ ထောက်ပံ့ကူညီပေးနေမှု၊ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ ပညာဆက်လက်သင်ကြားနေမှု အခြေအနေများနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အခြေအနေများကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။